WAXAAN HELNAY ALISSUM: SHARAXAADDA IYO SAWIRADA NOOCYADA CAANKA AH, WAXAY ISTICMAALAAN QAABABKA MUUQAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Alyssum: sawirada iyo sharaxaadda noocyada waaweyn, isticmaalka iyo xulashada lamaanayaasha
Alyssum waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah daboolka ugu wanaagsan ee dhulka hoostiisa. Warshadu waxay soo jiidataa midabyo dhalaalaya oo ah tufaax iyo caraf udgoon oo ku baahsan degmada oo dhan. Beeraha ubaxa waxay inta badan isku daraan midabada, iyagoo abuuraya qoraallo u gaar ah oo u ekaa naqshadaha sawirrada reer Faaris. Maqaalkani waxa aanu sharxi doonaa sida loo koro alissum sariirta ubaxyada, noocyo caan ah oo caan ah iyo waxa fiican in la isku daro.
Ma taqaanaa? Botanistu waxay u jilicsan yihiin qaabka ay alumiyumku ku heleen magaciisa rasmiga ah ee sababo la xidhiidha guryaha dawooyinka ee si weyn loo isticmaalay waqtiyadii hore, iyo maanta ayaa lumiyay xidhiidhkooda. Lagu tarjumay Laatiin, weedha "lyssa" macnaheedu waa "ka fogaansho shimbiraha."
Alyssum: waa maxay warshad this
Burachok, loburiariya, cawska, dhagaxa - alisamka ee floriculture ornamental isticmaalaan kuwan isbarbardhigaan. Warshadda waa mid aad u caan ah, qarsoodiga ugu weyn ee caankiisana waxa ku yaala caqligalka iyo quruxda ubax aan la qabin, taas oo kale, waxay kasbatay ixtiraamka beekeeper for tayada moodhin.
Alyssum ee sharaxaadda botanical, lagu tilmaamay sida dhaqanka ubax, ka tirsan qoyska Cruciferous ee caan ka Burachok. Calaamadaha ugu muhiimsan ee warshadda waa gaaban afkoda, oo gaarsiisan ilaa 8 - 30 cm, oo leh caleemo yar yar oo ah qaabka lanceolate iyo afar ubax yar yar, oo lagu soo ururiyey inflorescences.
Sprouts hore ee dhirta this leeyihiin hanti si ay u koraan, iyo caleenta wuxuu helo santoon sigaar ah sababtoo ah pubescence qaro weyn. Burushka ubaxa waa kala duwan yahay, laakiin inta badan waxaa ku jira liinta, guduud, jaalle, casaan iyo casaan cad.
Deriska ugu wanaagsan ee alixuumku waxay noqon doonaan: qoryaha, carnations, muscari, tulips, obriet, salvia, irises, calendula, marigolds iyo xitaa gole.
Iyadoo aan loo eegin midabka, waxay leeyihiin caruusad malab ah oo macaan. Ka dib markii ubax on caleemaha bislaadaan miraha pod-sida sida flat, iyo miro aad u fiican. Cilmi-baadhayaashu waxay xisaabiyeen in qiyaastii 3.5 kun oo doolar ay ku habboon yihiin hal gram.
Qeybaha floriculture waxaa ka muuqda boqollaal nooc oo ku badan Mediterranean, taas oo ah goobta dhalashada dhaqanka, iyo sidoo kale waddamada Yurub iyo Aasiya. Intaa waxaa dheer, botanistayaasha waxay kala saaraan kooxo sanadle ah iyo gaaban, dhirta geedaha iyo geedaha.
Muuqaal kale oo ubax ah waa muddada ubax. Qeybta quruxda badan ee alumiyadu waxay kuusocotaa midabyo nolol-bixin ah dhamaadka bisha May waxayna sii deynayaan miraha deyrta.
Florists ayaa qadarinayaan fududaynta alixuum ee sii kordhaya iyo dayactirka. Waa dhaqan aan qarsoodi lahayn, oo qurux badan oo qorraxda ka soo baxa oo si fiican u kobcaya xayawaanka qoyan, qoyan oo qoyan, iyo sidoo kale u adkeysan karaan abaar daba dheeraaday. Dhalinyaradu waxay la qabsadaan xaaladaha jiilaalka. Dhirta ayaa badiyaa abuuraysa, habka jarida iyo qaybinta rhizomes.
Waa muhiim! Muddada laga soo bilaabo bartamihii Maarso ilaa Abriil waa waqtiga ugu fiican ee lagu beeray abuurka allisum. In guga geed ubax furan yihiin lagu beeray May.
Noocyada ubaxyada caadiga ah
Kalluumaysatadu waxay ku kabaan noocyada kala duwan ee dabiiciga ah ee la yiraahdo Beelaha cusub, iyaga oo ku dhajinaya magacyo aan caadi ahayn sida "rooga cad", "rooga". Laakiin beerista, buurta, dhagaxyada, badda, cawska iyo noocyada Pyrenean alissum, kuwaas oo ah kuwo muhiim u ah beerahooda iyo muuqaalkooda, had iyo jeer waxay ahaayeen kuwo caan ah. Aan u fiirsanno faahfaahin dheeraad ah astaamaha ugu muhiimsan.
Waxaa loo yaqaanaa buurta. Dhinaca kale, waa dhaqanka cawlaanka cagaaran ee cagaaran oo leh koritaan kor u kaca ama caleemaha, oo aan ka badnayn 20 cm oo dheer, cagaha ayaa si cidhiidhi ah loogu daboolay caleenta leh tuubo fiiqan. Xagasha qorraxda-jaalaha ah ee inflorescences u muuqdaan bartamaha guga, iyo May ee miraha miraha ayaa bilaabay inuu sameeyo.
Waa muhiim! Si allisum si ay ugu raaxaystaan ​​inta ugu macquulsan leh ubax badan oo aan lumiyo saameyn ku qurxinta waqti isku mid ah, inuu bannaanka u khibrad talinaysaa jarida caleemaha inta lagu guda jiro formation of pods by 8 cm.
Botanistayaasha waxaa ka mid ah Alissum Gmelin (alyssum gmelinii) si ay u dhiraan dhirta dhirta ah oo xusuusnaado baahsanaanta aagga ka mid ah aagagga cagaaran-steppe ee Ukraine iyo Moldova. Burushyada jaalaha ah ee noocyada ayaa laga arki karaa dhinaca waddooyinka, xayiray dhulka iyo meelaha laga tagay. Noocyada soo hagaagay ee noocyada noocan oo kale ah waxay u adkaystaan ​​dhaxan, waxay door bidaan dhulka madow iyo substrates bacaadka ah leh nuurad iyo feerjire.
Fikrad u qalma noocyada:
"Paletta" (noocyo kala duwan oo ah palette color);
"Big Gem" (ballaaran oo ubax leh, oo aad u adkaysata barafka iyo abaarta);
Xajinta dahabiga ah (ku dhawaad ​​tijaabada duurjoogta).
In dabeecadda duurjoogta ah, noocyada noocan oo kale ah ee alissa (Alyssum maritimum ama jeegaanta badda) waxaa laga helaa caddaan iyo lilac, iyo in floriculture qurxinta waxaa lagu metelaa noocyo kala duwan oo kala duwan.
Warshadu waxay leedahay qaab isku dhafan oo isku dhejisan illaa 20 cm oo ballaaran, oo leh caleemo timo leh oo caleemo qallalan ah iyo buro yaryar oo ka muuqda xagaaga.
Kulan sidoo kale ubaxyada beerta kale: gaillardia, peony, mimulyus, kupena, zinnia, dharka, gumeysiga, geela.
Gobollada leh jawi diiran, dhaqanku wuxuu kobcayaa sanado badan, isagoo joogaya ubaxyada joogtada ah. Tani waxay ka dhacdaa Pyrenees, waddankeeda, iyo meelo kale oo qaybinta: qaybaha Canary, jasiiradaha Casov, xeebaha Bay of Biscay. Xeebaha diirran, noocyada waxaa lagu beeray sanadkiiba.
Biyaha Alyssum jecel yahay carrada ciidda, sida xeebaha hooyooyinka iyo dunes. Waxay u dulqaadaneysaa la'aanta qoyaan. Magaciisu wuxuu u sabab ahaa koritaanka goobaha mudnaanta leh.
In dhaqanka ee dalbashada noocyo:
"Tim Tim" (muraayad);
Easter Bonnet Deep Rose (xoogaa casaan ah);
"Violet Konigin" (guduud leh laamo waaweyn);
"Princess In Perple".
Caleenta Pyrenean ah (Alyssum pyrenaicum) waxaa lagu gartaa caleemo qoyan oo cufan leh oo cufan, dhirta ilaa 15-20 cm dheer iyo ubax yaryar oo leh xayawaan simmetrical ah oo gaaraya 5-8 cm. Buds furan xagaaga. Dibadda, xayawaanka waxay matalaan dhaqamada wakhti badan oo isku mid ah Alissum cad oo dabiiciyan ah.
Wakiilada Hybridu waxay u sharaxaan xumbada iyo ciidda bacaadka ah, oo aan hoos u dhigin daryeelka, waxay la qabsan karaan penumbra, laakiin xaqiiqdu waxay hubinaysaa inay ka muuqato inflorescences. Noocyada qaarkood ayaa joojiya gawraanka illaa iyo inta ay xaaladu macquul tahay.
Inta badan, beerta "Compactum" waxaa lagu beeray ubax, kaas oo lagu kala soocayo muuqaalka daaqsinka, ilaa 18 cm sare.
Ma taqaanaa? In ciidda bacriminta ah ee la bacrimiyay, alumiyu wuxuu bilaabi doonaa inuu si xoog leh u kordhiyo biomasska, oo la hakiyo habka gaasaska.
Guryaha noocan ah waa gobollada bari iyo koonfur bari ee Yurub, iyo qaybta galbeed ee Aasiya. Dabaylaha qallalan, qorraxda qorraxda ee wareegga iyo buuraha ayaa adkaynaya xaaladaha halista ah.
Alyssum oo qashin ah (Alyssum repens Baumgartner) waa mid lagu qiyaaso adkaysigeeda: waxay si fudud u badbaadin kartaa miraha 18-jirka ah iyo kulaylka 40-degree.
Dibedda, waa geed caws ah, ilaa 60 cm sare, oo leh raso qaro weyn on sprouts iyo caleenta, ubaxyo huruud ah dhalaalaya. Buds ka muuqato dhammaadka guga.
Marka Alissum dhagax weyn leh (Alyssum saxatile), ay duurka u yar helayaan qaab uispherical ah, si deeqsinimo leh ku daboolay dahab ah tufaax jilicsan. Gaar ahaan muuqaalka qurxinta waa kala duwan tahay xilliga dayrta, inta lagu jiro jaalaha ah ee caleenta. Ka dibna ubaxyada iyo xayawaanku waxay ka tagayaan hal darajo, iyagoo abuuraya meeldhexad yar oo leh dhexroor 40 cm iyo dherer ah oo ku saabsan 30 cm.
The old afkoda of this dilka ah this noqon doonaa duur joog ah waqti ka dib, iyo caleemaha ma dhici doono xitaa xilliga jiilaalka, ilaalinta duulaanka. Ubaxu wuxuu bilaabmaa guga waxana uu socdaa wax ka badan 40 maalmood, dhamaadka bisha Agoosto dib-u-kicinta waa suurtagal.
Waxaad la kulmi kartaa lobularia dhagaxa dhagaxyada ku yaala dhammaan wadamada yurub, marka laga reebo Great Britain. Noocyo soo kordhay ayaa aad u xasaasi u ah la'aanta qoyaanka iyo kuleylka. Runtii waa ku raaxeeyaa:
"Citrinum" (oo huruud ah oo leh liin liin);
"Wave Golden" (ubaxu wuxuu bilaabmayaa 2 sano jir);
Waa muhiim! Alyssum waa mid aad u xasaasi u ah boodada jilicsan. Si loo cirib tiro cayayaanku waxay ka caawineysaa xalka 1 litir oo biyo ah iyo 2 qaado oo khal, ama boodh boodh.
Isku-dubaridka iyo isticmaalka almuna ee naqshada muuqaalka
Alyssum ee qaabeynta muuqaalka, iyada oo aan la buunbuunin, waa lagama maarmaan. Inkasta oo dadka qaarkiis ay ka xishoodaan koritaanka hoose ee geedka this, laakiin dhab ahaantii wax ka fiican for xuduudaha beerta ubaxa laguma heli karo.
Bannaanka beerta waxay jecel yihiin inay qurxiyaan xayawaanka lobularia, dildilaaca udhaxeeya lakabyo jilicsan iyo xitaa dildilaaca dhagxaanta dhagaxa leh "roodhid".
Isticmaalidda duurka dhalaalaya waxaa laga heli karaa beeraha dhagaxyada, isku dhafan, xitaa balalkies iyo rabatkah. Intaa waxaa dheer, doorashadan waa mid aan la karin, sababtoo ah ubaxa waxaa loo habeeyey qorraxda iyo abaaraha. Gaar ahaan waxay ku habboon tahay taageerayaasha si ay u soo saaraan qaar ka mid ah jardiinooyinka kala duwan ee dhagaxyada dhagaxyada iyo dhagxaanta.
Nidaamka muuqaalka ayaa sidoo kale inta badan isticmaala: geed caws, thuja, qoryo, juniper, spruce, acacia, maple, ash, kedar, qorax, jasmine, larch, yew, firil, lilac.
Isticmaalayaasha dhuxusha ee ubaxa dhaadheer ayaa faa'iido u leh isticmaalka qaababka ubaxa. Marka beeritaanka waa muhiim in la tixgeliyo dhererka iyo wakhtiga dhirta ubaxyada, iyo sidoo kale tayada.
Tusaale ahaan, balonka caddaanka ah ee alumanka leh ee tulipska cas oo u muuqda mid muuqaal ah. Waxaad dooran kartaa isku-dhafka midabada leh ee dhadhankaaga laga bilaabo sannadlaha iyo sanadaha soo socda. Isku dheelitirka caleemaha (casuus, buluug) iyo midabada buluugga ah ayaa si muuqata loo wada dhafay.
Hadda oo aad taqaanid wax walba oo ku saabsan alixum, isbarbardhigga noocyada iyo noocyada, sida fanaan, waxaad ka soo jiidan doontaa muuqaalkaaga ka yimid palette ubaxa. Oo ha u baroorto, oo ha ku farxin meelaha farxadda leh iyo dadkaaga.